कोभिड -१९ खोपः प्रदेश २ का लागि कसरी पठाउने भन्नेबारे अलमल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
मंगलबार, फागुन २५, २०७७Tue, Mar 09, 2021
कोभिड -१९ खोपः प्रदेश २ का लागि कसरी पठाउने भन्नेबारे अलमल पथलैया कोल्ड स्टोर प्रयोग गर्नेबारे मत बाझियो
कल्पना पौडेल शुक्रबार, माघ ९, २०७७, १८:५१:००
काठमाडौं- कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाल आइसकेपछि कहिलेदेखि लगाउन सुरु हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले कुन प्रदेशमा कति जनसंख्याका लागि कति डोज भ्याक्सिन पठाउने, दुई डोज एकै पटक पठाउने वा दुई पटक गरी पठाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने,‘केही व्यवहारिक कुरामा सहमति भइरहेको थिएन। प्रदेश २ को बारा पथलैयास्थित कोल्ड रुम अहिले संचालनमा छैन।
लामो समयदेखि संचालनमा नआएको पथलैया कोल्ड स्टोर कोभिड खोप भण्डारणका लागि मर्मत गरि सकिएको छ। तर, अहिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे मत बाझिएको बताइएको छ।
छलफलमा सहभागिमध्ये केहीले प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये दुई जिल्ला सप्तरी र सिरहाका लागि विराटनगरको कोल्ड स्टोर र अन्य ६ जिल्लाका लागि हेटौँडास्थित कोल्ड स्टोरमा खोप भण्डारण गरेर पठाउन सुझाव दिएका छन्। केहीले भने पथलैयाको स्टोर मर्मत भइसकेकाले त्यही पठाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
प्रदेश २ सहित सातै प्रदेशमा खोप पठाउने विषयमा मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझसम्म छलफल चलिरहेको छ। छलफलबाट आएको सुझावका आधारमा शनिबारबाटै प्रदेशका लागि खोप पठाइने छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार पठाउने तयारी गरेको थियो। तर आवश्यक तयारी नपुग्दा शनिबार मात्र प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो।
भारत सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप हिजो बिहीबार नेपाल आइपुगेको हो।
सरकारले ७७ जिल्लाबाट एकसाथ खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोप बुझेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पहिलो चरणमा आएको खोप कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउने योजना रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाललाई थप ४० लाख डोज भ्याक्सिन आवश्यक छ।
उनले भने,‘अनुदानबाहेक थप आवश्यक खोप खरीदको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुनेछ। पारदर्शी रुपमा खरीद गरी न्यायपूर्ण रुपमा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त खोप साढे चार लाख जनसख्ंया अर्थात करिब डेढ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आएको खोप कोभिड-१९ को उपचार, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिहरुलाई लगाउने जनाएको छ।
त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयमा खोप लगाउने व्यक्तिहरुको नामावली अनलाइन दर्ता गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा एकै पटक खोप अभियान सुरु गर्ने गरी शनिबारबाट खोप ढुवानी गर्ने तयारी गरिएको छ।
‘हामीले सात प्रदेशमा कति खोप लगाउनुपर्ने व्यक्तिहरु छन्, सोही हिसाबमा खोप, सिरिन्ज र अन्य सामग्री पनि पठाउनुपर्ने हुन्छ। आज बेलुकासम्म त्यसको टुंगो लागेपछि भोलिदेखि खोप पठाउछौँ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
पहिलो चरणमा करिब एक महिनाको अवधिमा फ्रन्टलाइनरहरुले खोप पाइसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले लक्षित जनसंख्यालाई ६, ७ महिनाभित्र खोप लगाइसक्ने जनाएको छ।
‘हामीले कोभ्याक्सबाट आउने खोप लगाइसकेपछि बाँकी कतिलाई लगाउनुपर्छ तथ्यांक आउँछ। मन्त्रीज्यूले चाँडै खरीद प्रक्रियाको तयारी पनि गर्नु भन्नुभएको छ। सबै कुरा सामान्य रहेमा ६, ७ महिनामा सबैले खोप पाउने अवस्था रहन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो।
स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले भारतबाट खोप आएपछि बढीमा १५ दिनभित्र खोप अभियान सुरु हुने बताएका छन्।
भण्डारणमा छैन समस्या
खोप अपेक्षा गरिएको समयभन्दा अगाडि आएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीले अहिलेको खोपका लागि भण्डारणमा समस्या नभएको बताए।
भारत सरकारले दिएको खोप २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले समस्या नभएको विभागको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केन्द्रिमा खोप राख्ने क्षमता, खोप स्टोर र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा खोप पुर्‍याउनका लागि रेफ्रिजेटर भ्यानको समेत तयारी गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले केन्द्रिय खोप स्टोरमा रहेको ९ वटा कोल्ड रुममध्ये २ वटा रुम कोभिड खोप भण्डारण तयार गरेको थियो।
२ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नका लागि ७ हजार ५०० र ३ हजार ७५० लिटर भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड रुम तयारी अवस्था राखिएको थियो। हाल भारतबाट ल्याइएको खोप त्यहीँ भण्डारण गरिएको छ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतबासका कर्मचारीले नेपाललाई खोप दिने निर्णय गर्नुपूर्व टेकूस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रको अवलोकन गरेको थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतले नेपालमा भण्डारणका लागि समस्या नभएको र अन्य तयारीका आधारमा अपेक्षाभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराएको हो।
केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रका २ वटा कोल्ड रुममा एउटामा २८ लाख ७३ हजार ५६० डोज र अर्कोमा १३ लाख ४१ हजार डोज खेप भण्डारण क्षमता रहेको बताइएको छ।
त्यसबाहेक, राजधानी बाहिरको सन्दर्भमा विराटनगरमा रहेको ३ वटा कोल्ड रुममध्ये एउटा कोल्ड रुपमा कोभिड खोपका लागि छुट्याइएको छ। उक्त कोल्ड रुममा २ हजार २५० लिटर क्षमता रहेको छ। जसमा ८ लाख ६२ हजार डोज खोप भण्डारण क्षमता रहेको छ।
व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार पथलैया बारामा रहेको खोप स्टोरमा रहेको ३ वटै खेपस्टोरमा कोभिड खोप स्टोर गर्ने तयारी गरिएको छ।
तीनमध्ये २ वटा कोल्ड रुममा ३ हजार ७५० लिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ। त्यहाँ प्रति रुममा १४ लाख ३६ हजार ७०० डोज भण्डारण क्षमता रहेको छ। भने ७ हजार ५०० लिटर क्षमता भएको तेस्रो रुममा २८ लाख ७३ हजार ५०० डोज खोप भण्डारण क्षमता रहेको छ। त्यहाँबाट बिराटनगर, हेटौँडा र प्रदेश २ लाई समेट्ने बताइएको छ।
पथलैयामा रहेको कोल्ड रुम बिग्रिएर सञ्चालनमा आएको थिएन। केही दिन अघि काठमाडौैंबाट पठाइएका प्राविधिकहरुले उक्त स्टोर मर्मत गरिसकेको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा भीमसिंह तिंकरीले जानकारी दिए।
पोखरा, बुटबल र धनगढीमा एउटा कोल्ड रुम कोभिड खोपका लागि छुट्याइएको छ। २ हजार २५० लिटर क्षमता भएको उक्त रुममा ८ लाख ६२ हजार डोज खोप भण्डारण गर्न मिल्छ।
नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा ३ हजार ७५० लिटर क्षमता भएको कोल्ड रुम तयार गरिएको छ। जहाँ १४ लाख ३६ हजार ७०० डोज खोप भण्डारण क्षमता रहेको बताइएको छ।
कोभिड खोप पहिले कसले पाउँछ? यस्तो छ सरकारको योजना
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप बारेमा प्राविधिक विषयमा जानकारी दिन बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा श्यामराज उप्रेतिको संयोजकत्वमा कोभिड भ्याक्सिन प्राविधिक सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ।
समितिले नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने संख्या, जोखिमका आधारमा खोप पाउनेहरुको प्राथमिकता समेत छुट्याइ सकेको छ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा आएको खोप फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, सफाईकर्मी र सामाजिक दुरी कायम गरी काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई दिइने योजना रहेको बताए।
समितिका संयोजक उप्रेतिले विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभीलगायत संस्थाहरु मिलेर बनेको कोभ्याक्स फ्यासिलिटि मार्फत २० प्रतिशत उपलब्ध हुने बताए।
कोभ्याक्सले आगामी मार्च अप्रिलसम्ममा खोप नेपालमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
उनले भने,‘कोभ्याक्स फ्यासिलिटिले विश्वका धनीगरिब सबै देशले समान रुपमा कोभिडको खोप पाउन भनेर काम गरिरहेको छ।
सरकारले १५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यालाई ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ।
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक दुरी कायम गर्न नसक्ने सोसियल वर्कर, ५५ वर्ष माथिका दीर्घरोगी, ४४ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका दीर्घ रोगीहरुलाई क्रमशः खोप पाउने प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसपछि कामका लागि बाहिर जाने श्रमिकहरुलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब ९ हजार स्वास्थ्यकर्मी खोप अभियानमा परिचालन हुने अनुमान गरेको जनाएको छ।
कोरोना महामारी : जोखिम कायमै, निस्फिक्री नेपाली
कोभिड खोप लगाउनेको संख्या किन कम?
भारतीय कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी मागेपछि कोभिड खोप खरिदमा ढिलाइ
फर्मासिस्ट र धनी विवाद : यस्तो छ औषधि व्यवस्था विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्दै गरेको निर्णय औषधिको बिक्रि वितरणलाई नियमअनुसार गराउन र विकृति रोक्न फार्फेसीका धनी र बिक्रि गर्ने व्यक्ति एकै हुनुपर्नेमा धेरैको जोड छ। फरक फरक हुँदा फर्मासिस्टको लाइसेन्स भाडामा लगाउने क्रम बढेको र फार्मेसी पेशामा विकृति भित्रिएको भन्दै धेरैले यसमा चासो पनि दिइरहेका छन्। १२ घण्टा पहिले
आइतबार एकै दिन एक लाख ४३ हजारले लगाए कोरोना खोप दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरुका लागि सुरु गरिएको खोप अभियानको पहिलो दिन साँझ ६ बजेसम्म २ हजार ९३ वटा खोप केन्द्रबाट १ लाख ४३ हजार १४२ जनाले खोप लगाएका हुन्। आईतबार, फागुन २३, २०७७
कोभिड खोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने - सबैले खोप लगाएर अभियानलाई सफल पारौं 'मैले कोभिडको भ्याक्सिन लगाएँ, अहिले कुनै कम्प्लिकेसन छैन, सबैले खोप लगाएर खोप अभियानलाई सफल पारौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने। आईतबार, फागुन २३, २०७७
पछिल्लो २४ घण्टामा ८९ संक्रमित थपिए, ४१ जना डिस्चार्ज १० घण्टा पहिले
आइतबार डेढ लाख बढीले लगाए कोरोनाको खोप १० घण्टा पहिले
फर्मासिस्ट र धनी विवाद : यस्तो छ औषधि व्यवस्था विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्दै गरेको निर्णय १२ घण्टा पहिले
नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता १४ घण्टा पहिले
महिलालाई स्वस्थ रहन डा एलिसाको १० सुझाव १८ घण्टा पहिले
नारी दिवसमा विध ल्याबको विशेष छुट १९ घण्टा पहिले
पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग १९ घण्टा पहिले
आइतबार एकै दिन एक लाख ४३ हजारले लगाए कोरोना खोप आईतबार, फागुन २३, २०७७
६५ वर्ष माथिकालाई कोरोना खोपः प्रधानमन्त्रीलाई सहज, वृद्धवृद्धा दुई घण्टासम्म लाइन ! आईतबार, फागुन २३, २०७७
पछिल्लो २४ घण्टामा ६६ संक्रमित थपिए, ५८ जना डिस्चार्ज आईतबार, फागुन २३, २०७७
रगत पातलो गराउने औषधि ‘एस्पिरिन’ लिइरहेकाले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन लिने की नलिने?शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
दोस्रो प्राथमिकतामा परेकालाई फागुन २३ गतेपछि दुई चरणमा खोप दिइने बुधबार, फागुन १९, २०७७
कपालको जरामा नपर्ने गरी कन्डिसनरको प्रयोग शनिबार, फागुन २२, २०७७
नर्स भुवनेश्वरीको अनुभव : बिरामीको मृत्युले आफैं विचलित बनेको त्यो दिन बिहिबार, फागुन २०, २०७७
रगत पातलो गराउने औषधि ‘एस्पिरिन’ लिइरहेकाले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन लिने की नलिने? शुक्रबार, फागुन २१, २०७७